‘हजार जुनीसम्म’को गीत: आर्यनसँग दीपाश्रीको ठुम्का | Cinekhabar.com
पलसँग काम गर्न लालाहित थिए दयाहाङ
सुरेन्द्रको फिल्ममा नितेश र अदितीको जोडी ?
‘२ नम्बरी’ बनाउँदै दीपेन्द्र, मुख्य भूमिकामा दयाहाङ, पल र वर्षा
‘चपली हाइट ३’मा बोल्ड स्वस्तिमा र सुपुष्पा
विशालको निर्देशनमा कस्तो बन्ला नेपाली ‘अर्जुन रेड्डी’ ?
साङ्लोको गीतमा विराज र निकिताको ठुम्का
‘दि कर्मा’को ‘साना साना सपना’ सार्वजनिक
सुव्रतले ‘के घर के डेरा’ बनाउने, मुख्माय भूमिकामा दयाहाङ र विपिन
७० दिनमा सकियो प्रदीपको ‘प्रेम गीत ३’
युट्युबमा सौगात र विपिनको ‘लालपूर्जा’ रिलिज
Home news ‘हजार जुनीसम्म’को गीत: आर्यनसँग दीपाश्रीको ठुम्का
‘हजार जुनीसम्म’को गीत: आर्यनसँग दीपाश्रीको ठुम्का
on: २७ असार २०७६, शुक्रबार १७:५६ In: newsTags:
भाद्र ६ गतेलाई रिलिज डेट तय गरेको फिल्म ‘हजार जुनीसम्म’को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक ‘आज नगद भोलि उधारो’ गीतमा पछिल्लो समयकी सफल निर्देशक दीपाश्री निरौला फिचर्ड छिन्। दीपासँग नायक आर्यन सिग्देलले पनि नृत्य गरेका छन्। भिडियोमा शिवहरी पौडेल, स्वस्तिमा खड्का, नव–नायक अखिलेस प्रधान, रामचन्द्र अधिकारी, उत्तम केसी लगायतलाई पनि देख्न सकिन्छ।
कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी रहेको भिडियोलाई पुरुषोत्तम प्रधानले छायांकन गरेका हुन्। एकनारायण भण्डारीको शब्द रहेको उक्त गीतमा बसन्त सापकोटाको संगीत तथा प्रल्हाद तिमिल्सिना, मिना निरौला र दीपाश्रीको स्वर छ।
‘नाई नभन्नु ल’ सिरिजका निर्देशक विकासराज आचार्यको निर्देशन रहेको फिल्मको पटकथा सामिप्यराज तिमल्सेनाले तयार पारेका हुन्। फिल्ममा संचिता लुइँटेल, अनुभव रेग्मी लगायतको पनि अभिनय रहेको छ। कविता रेग्मी फिल्मकी कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा विशाल चाम्लिङको लगानी रहेको छ।
रेखाको फिल्म निर्देशन गर्दै रेनशा
चैत २८ मा अनमोल र प्रदीप जुध्ने ?
१४ माघ २०७६, मंगलवार २०:१८
१३ माघ २०७६, सोमबार २०:५५
१३ माघ २०७६, सोमबार २०:३४
१३ माघ २०७६, सोमबार २०:०७
१२ माघ २०७६, आईतवार २०:५३
१२ माघ २०७६, आईतवार २०:३२